WOT तपाइँको प्रतिष्ठा हो? | Martech Zone
WOT तपाइँको प्रतिष्ठा हो?
शनिबार, जुलाई २१, २०१। शुक्रबार, जुन 19, 2015 Douglas Karr
यो आश्चर्यजनक कुरा हो कि त्यहाँ यस भन्दा बढी समाचार थिएन WOT र Facebook को संलग्नता। WOT को अर्थ "वेब अफ ट्रस्ट" हो र प्रयोगकर्ताहरूको समुदाय-निर्मित साइट हो जुन वेबसाइटहरूलाई मूल्या rate्कन गर्दछ।
मेमा, फेसबुकले प्रयोगकर्ताहरूलाई मालिसियस साइटहरूमा क्लिक गर्नबाट रोक्नको लागि पुलिस कुकुरको रूपमा सेवा प्रयोग गर्न सुरु गर्‍यो। सतहमा फेसबुक द्वारा एक राम्रो चाल को लागी लागी ध्वनि, तर WOT को अंतर्निहित pinnings वास्तवमा अलि डरलाग्दो छ। केहि साइटहरूमा WOT साथै "वेब अफ ट्रोल" का लागि पनि खडा हुन सक्छ। एउटा मुद्दामा ईमेल सेवा प्रदायकको साइटहरू छन्।
WOT मा मेलचिम्प:
WOT मा ईमेलभिसन:
WOT मा ExactTarget:
WOT मा iContact:
MailChimp, ईमेलभिसन, IContact र ExactTarget very एकदम फरक ईमेल सेवा प्रदायकहरू हुन् तर तिनीहरू सबै अनुमति-आधारित मार्केटिavमा भारी नै व्यस्त छन्, उनीहरूका ग्राहकहरू दुवै स्पाम नियमहरूमा शिक्षित छन् भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्दै, र सबैले छुट्याउने टिमहरू संलग्न गरेका छन् जुन निरन्तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग सम्बन्ध बनाउँदैछ। यदि उनीहरूले स्प्यामलाई अनुमति दिए भने, उनीहरूको छुट्याउने दरहरू तल झर्ने छन् र तिनीहरू केवल व्यापारबाट बाहिरिनेछन्। ईएसपी बास गर्छ र इनबक्समा सन्देश प्राप्त गर्ने क्षमतामा सास फेर्छ।
म शंका गर्दिन कि केहि अनावश्यक ईमेलले यसलाई यी कुनै पनि ESP हरूबाट बाहिर बनाएको छ ... तर म शंका पनि गर्दिन कि स्प्यामका लागि जिम्मेवार ग्राहकलाई परामर्श दिइयो वा कम्पनीबाट बाहिर निकालियो। यी प्रत्येक ईएसपीको कडा निर्देशनहरू छन् जुन कम्पनीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। ग्राहकहरुलाई जवाफदेही राख्नुको सट्टा, WOT ले IP ठेगाना मार्फत सन्देशको स्रोतमा पूर्वनिर्धारित गर्दछ र ESP लाई आलोचना लागू गर्दछ, ईमेल समुदायमा उनीहरूको अडिगको ख्याल नगरी। WOT एक यूरोपीयन साइट को रूपमा शुरू भएदेखि, यूरोप मा साइटहरु पनि उत्तरी अमेरिका मा साइटहरु भन्दा धेरै आलोचनात्मक गरीएको छ।
यी गरीब रेटिंग्सको परिणाम यो हो कि यी साइटहरू कहिलेकाँही साइटहरू द्वारा अवरुद्ध गरिएका छन्, जस्तै फेसबुक, जब प्रयोगकर्ताहरूले बाह्य लिंकमा क्लिक गर्छन्। एक गलत WOT रेटिंग को कारण आफ्नो सबै फेसबुक यातायात गुमाउनु कल्पना गर्नुहोस्! आजकल त्यो पर्याप्त हिट हो।
विडंबना, केहि पीorn साइटहरूमा ईमेल सेवा प्रदायकहरू भन्दा विश्वासको क्षमताको राम्रो स्कोरहरू छन्!
समस्या यो हो कि धेरै मानिसहरूलाई लाग्छ कि भीडमा जब त्यहाँ बुद्धि छ वास्तवमा त्यस्तो कुनै प्रमाण छैन। धेरै भीडहरू अज्ञात प्रभावकारीहरू मिलेर बनेका हुन्छन् जसलाई अज्ञात अनुयायीहरू पछ्याउँदछन् ... र केही प्रभावकर्ताहरू वास्तवमै उनीहरू विषय निर्धारण गर्ने विषयका विशेषज्ञ पनि हुँदैनन् जुन उनीहरू मूल्या rating्कन गर्दैछन्।
यस विशिष्ट अवस्थामा हामी देख्छौं कि WOT समुदाय… जस मध्ये धेरैले सायद कहिले पनि ईमेल सेवा प्रदायक प्रयोग गर्नुपर्दैन… सोच्दछ कि जो कोही ईमेलको सामूहिक खण्डहरू बाहिर निकाल्दैछ केवल स्प्यामर हो। रेटिंगहरू अज्ञात छन्, राम्रोसँग लेखिएको छैन, र कुनै प्रमाण प्रदान गर्दैन कि स्रोत प्रतिष्ठा मुद्दा को प्रश्न मा ईमेल सेवा प्रदायक हो। सटीकता वा ज्ञानको लागि समीक्षालाई प्रश्न गर्ने कुनै माध्यम छैन ... र भीडको शिकार हुने कम्पनीहरूको लागि त्यहाँ कुनै रिसोर्स छैन।
यदि हामी भीडको विवेकमा हाम्रो साइटको प्रतिष्ठा छोड्दैछौं, जसले भीड शिक्षित छन् र कसले के गरिरहेको छ भनेर यकिन गर्दैछ? यसले यी साइटहरू र सेवाहरूको प्रमाणित ग्राहकहरूको लागि विक्रेतालाई दर्जा दिन सक्षम हुने अधिक समझदार बनाउँदछ कुल अपरिचितहरू भन्दा जो केवल निम्न पछ्याइरहेका छन्। बुद्धि भीड को। मलाई यकिन छैन कि WOT फेसबुक वा अन्य कुनै अनुप्रयोग प्रयोग गर्नका लागि राम्रो समाधान हो।
मँ मेरो पोस्टले यस डोमेनको विश्वस्ततामा कसरी प्रभाव पार्छ भनेर म हेर्नको लागि हेर्दै छु! मलाई विश्वास छ यो राम्रो लाग्दैन।
टैग: फेसबुकप्रतिष्ठाविश्वास गर्नुहोस्विश्वास को वेबwot
WordPress Custom मा कस्टम पृष्ठभूमिहरू थप्नुहोस्
लिंक्डइन प्रोफाइल र उपयोग
जुलाई १,, २०१ at १::12२ अपराह्न
साइटको प्रतिष्ठा रेटिंगबाट गणना गरिएको छ, टिप्पणी होइन। टिप्पणी छोड्नु पूर्ण रूपमा वैकल्पिक हो, र प्रतिष्ठासँग असहमत प्रयोगकर्ताहरूले पनि टिप्पणी लेख्ने बढी सम्भावना हुने भएकोले टिप्पणी प्रतिष्ठामा विरोधाभास देखा पर्न असामान्य कुरा होइन।
Email चार ईमेल सेवा प्रदायकहरूको प्रतिष्ठा रेटिंग्स जुन तपाईंको पोष्टिंगमा उल्लेख गरिएको छ राम्रो वा उत्कृष्ट छ। कृपया स्कोरकार्डहरू हेर्नुहोस्:
एक मात्र खराब प्रतिष्ठा छ कि यो एक हो:
हाम्रो नामले स indicates्केत गर्दछ, WOT विश्वास को बारे हो। वेबसाइटको टेक्निकल सेफ्टी एक महत्त्वपूर्ण कारक हो जब यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्दछ। जहाँसम्म, यदि तपाइँ वेबसाइटको पछाडि सामग्री वा संगठनमा विश्वास गर्नुहुन्न, वा यी केसहरूमा, यदि तपाइँ स्प्याम प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, साइटलाई खराब दर्जा दिन यो एक मान्य कारण पनि हो।
WOT प्रतिष्ठान रेटिंग्स प्रयोगकर्ताहरूका व्यक्तिपरक विचारहरू र वेबसाइटहरूका बारे विश्वसनीयता हुन्। हामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रो विश्वस्त स्रोतहरू (फिसि mal र मालवेयर ब्ल्याकलिस्टहरू, इत्यादि) बाट प्राप्त जानकारीको साथ राय / अनुभवहरूको एक ठूलो रकम (उदाहरणका लागि भीडहरूको भीड) संयोजनले हामीलाई वेबसाइटको विश्वासयोग्यताको बारेमा सबैभन्दा सही जानकारी दिन्छ।
यदि तपाइँ रेटि withसँग असहमत हुनुहुन्छ भने, कार्यको सबैभन्दा प्रभावकारी पाठ्यक्रम यसलाई आफैंलाई मूल्या rate्कन गर्ने र साइटको साथ तपाईंको आफ्नै अनुभव वर्णन गर्ने टिप्पणी थप्नु हो।
जुलाई १,, २०१ at १::14२ अपराह्न
मलाई लाग्छ कि यो सुरक्षित छ कि मानौं कि यदि व्यक्ति टिप्पणी गर्न समय लिईरहेका छन्, तिनीहरू साइट पनि अoring्ग गर्दै छन्। म तपाईं सामग्री वा संगठन को भरोसा को बारे मा असहमत छैन। म तपाईंसँग तपाईंको साइटको शुद्धताको बारेमा असहमत छु। तपाईं स्प्याम उल्लेख गर्नुहुन्छ, तर राम्रो मूल्या rated्कन गरिएको ईमेलविजन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छुटकारा र अप्ट-इन, अनुमति-आधारित मार्केटिंग सन्देशको रूपमा एक नेता हो। तपाईंको साइट केवल गलत छ।
मैले अर्को भेट्टाए:
वेबट्रेंड्स इन्टरनेट मा पहिलो विश्लेषण कम्पनी थियो। ट्रोलि your टेक्नोलोजीको कारण तपाईंको साइटको साथ ट्रोलहरू ईरेटिंग हो। विडंबना यो हो कि तपाईंको धेरै साइटले गुगल एनालिटिक्स प्रयोग गर्दछ - ट्र्याकिcking आगंतुकहरू।
यस प्रतिक्रियालाई खारेज गर्दै र मानिसहरूलाई 'बढि रेटिंगहरू प्राप्त गर्न' सल्लाह दिँदै यहाँ गम्भीर मुद्दाको स्वामित्व हुँदैन। तपाईंको कम्पनीसँग यी व्यवसायहरूमा जाने ट्राफिकलाई गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्ने क्षमता छ - तर तपाईं मान्य, कानुनी, विश्वासयोग्य व्यवसायहरूको खोजी गर्न वा तिनीहरूको गरीब रेटिंग्स खाली गर्न कुनै माध्यम प्रदान गर्नुहुन्न।
मलाई ट्रस्टको वेब मनपर्दछ, तर मैले समान चीजहरू याद गरेको छु। केहि समीक्षाहरू, वास्तवमा धेरै समीक्षाहरू, जस्तै केही खास सेवाको मेसेन्जरमा गोली हान्नको लागि किनभने प्रयोगकर्ताहरूले विशिष्ट नियमहरू र सेवा सर्तहरूको अवज्ञा र बेवास्ता गरेको कारण। म अझै WOT प्रयोग गर्छु, म यसलाई नुनको अन्नको साथ प्रयोग गर्दछु।
सेप्टेम्बर 19, 2011 मा 10: 03 AM
डिजिटल डायन शिकारको नयाँ युगमा स्वागत छ।
यदि भीड जानकार थियो भने हामी सबैलाई सरकारले निर्णय लिन आवश्यक पर्दैन।
वास्तवमा, म वास्तवमै आश्चर्यचकित छैन कि वेब अफ ट्रस्ट र फेसबुक बीचको सम्झौताको बारेमा बढी प्रचार थिएन किनकि यसले वेब अफ ट्रस्ट प्रणालीलाई ज्ञानी व्यक्तिहरूको विश्लेषणमा पर्दाफास गर्छ। र यसले तिनीहरूको प्रणालीको असंख्य त्रुटिहरू र उनीहरूको रेटिंग्सको विश्वासनीयताको कमीलाई उजागर गर्न धेरै समय लिने थिएन।
यदि तपाईं वेब अफ ट्रस्टको बारेमा अधिक जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई गहन विश्लेषण पढ्न आमन्त्रित गर्दछु जुन मैले लेखेको छु: MYWOT वेब अफ ट्रस्ट समीक्षा: आधुनिक वेब टोटलिटेरिज्म
यो MyWot पछाडि भएको बदबूदार सत्यलाई पर्दाफास गर्ने समय हुन सक्छ ...
जनवरी 25, 2012 मा 8: 21 एएम
डग, मैले मेरो ब्लगको साथ परीक्षण गरे। मेरो मूल्यांकनको लागि पेश गर्नु अघि मेरो साइटसँग सकारात्मक रेटिंग थियो। त्यसपछि अचानक सबै ट्रोलहरू काममा गए र नकारात्मक रूपमा मूल्या rated्कन गरियो। मैले यसको बारेमा एक पोष्ट लेखें जुन तपाईलाई चाख लाग्न सक्छ:
मलाई थाहा छैन किन फेसबुकले उनीहरूसँग सम्झौता गर्‍यो। तिनीहरूको रेटिंगहरू हेरफेर गर्न सकिन्छ र मैले यसलाई मेरो पोष्टमा प्रमाणित गरें। तिनीहरू वैध ब्लगरहरू र अनलाईन व्यवसायहरूको प्रतिष्ठा नष्ट गर्दैछन् र यसबाट भाग्दै छन्। तिनीहरू नकारात्मक रेटिंग बढावा दिइरहेका छन् किनकि यसले उनीहरूको प्रयोगकर्ता आधार बढ्न मद्दत गर्दछ। सकेसम्म धेरै नयाँ प्रयोगकर्ताहरू प्राप्त गर्न WOT ले विवादको प्रयोग गर्दछ।
डेबोरा बाहिर जान्छ र मूल रूपमा सबैलाई साइट आफैंमा मूल्या rate्कन गर्न भन्छ, वा अरूलाई यो दर्साउनको लागि प्राप्त गर्नुहोस्। त्यो सही त्यहाँ तिनीहरूको वास्तविक इरादा पर्दाफास।
मई 18, 2012 मा 10: 45 एएम
त्यहाँ निराश मान्छे को धेरै जो त्यहाँ
थाहा छैन के गर्ने सबै खराब रेटिंग mywot ले के गर्ने भनेर।
यहाँ केहि छन् जो यस बारे केही गर्न कोशिस गर्दै छन् -
MyWOT कुनै संग कहिँबाट पनि व्यवसायको साथ गम्भीरतापूर्वक गडबड गर्दैछ
प्रतिष्ठा। Of ०% रेटिंग्स प्रयोगकर्ताहरूको समूहले बनाएको जस्तो देखिन्छ।
तिनीहरूको टिप्पणी टेम्प्लेट जस्तो देखिन्छ र प्रायः नकरात्मक। तिनीहरू यो दावी गर्छन्
दरहरू ठूलो संख्यामा भोटहरूको आधारमा बनाइन्छ तर त्यो शुद्ध झूट हो।
संचालित उपयोगकर्ता मूल्या rating्कन तौल सामान्य प्रयोगकर्ताको भन्दा उच्च छ। त्यसो गरौं
त्यहाँ केहि प्रयोगकर्ताहरू बनाउँनुहोस् र दर्जा नदिनुहोस् जबसम्म हामी संचालित प्रयोगकर्ता र भोईला, हामी
कसैको प्रतिष्ठा पेंच गर्न सक्नुहुन्छ। ओह, यदि तिनीहरूले हामीलाई पैसा तिर्छन् भने, हामी हाम्रो हटाउँछौं
खराब रेटिंग्स। राम्रो व्यापार यो छैन?
मलाई लाग्छ geeks MyWOT (SCAM को वेब) मा धेरै पैसा कमाउन सक्छ।
मँ @spot_mark: disqus लाई मन्जुर गर्छु, उनीहरूको रेटिंग प्रणालीमा कुनै कविता वा कारण छैन।